I Cologne Festival ngokuqinisekileyo kubalulekile esongeza kuluhlu yakho emele. 1.5 Izigidi eziya phantse rhoqo ngonyaka, uyavuma! Eyaziwa ngokuba yesihlanu-lonyaka, eli hlabathi-edumileyo festival ngokuqinisekileyo ukuba abe zonke ekuphileni. I Cologne ekhanivali asinto nje fun kodwa super lula ukuya ngololiwe, ngoncedo Ukugcina Ukuqeqesha Nazi amacebiso zethu ngokuba The Cologne Festival 2019 kwaye indlela apho ngololiwe.
Lixesha ukuya costume shopping. Ngubani na ongayithandiyo ilokhwe phezulu? I style eyahlukileyo kunokuba evela imigubho Brazilian. Cinga "Isosha Prussia" ngaphezulu nge idosi lunzima ukubunjwa sequins!
Kuba iibhola kunye nezinye iziganeko eyochitha, izinxibo ezingcakacileyo Kunconywa. Ukuba ufuna nyani ukuba amava kulo mkhosi;, ngoko ke kufuneka ukuba uye ngaphandle! Nje ukukhumbula ukuba ukunxiba into efudumeleyo ngaphantsi! The real Cologne carnival fan is not put off by the sezulu! Iindwendwe afika ngomzuzu wokugqibela uya kufumana iimaski, zedrama, uze wenze-up ezivenkileni ezininzi kumbindi wesixeko. Njengelinge lokugqibela, iimpumlo elula iphepha ebomvu zonke udinga. ufuna abanye dress ulwazi.
Eli gama libhekisela pubs, yezitena zokudlela. Phantse bonke bathathe inxaxheba ekubhiyozeleni Cologne Carnival. Bona ukususa ifenitshala ukudala dance floor enkulu uhombise yonke into enemibala iintsuku ezintandathu yokubhiyozela emgceni. Xa pubs ezininzi lendawo, Kölsche kuphela umculo udlalwa (iingoma kwi Kölsch lwesigodi). Uya kusoloko ukufumana ukuya kutsho kwimitha-300 emigceni ixesha elide phambi pubs yesintu.
in 1824 e Beuel, inxalenye Bonn, iqela iqhoshana mabhinqa bobunye ikomiti yabo Karneval ezabo. Kubonakala babediniwe ukwenza impahla lo gama wonke kubhiyozelwa Karneval enye. Bona iyangena Town Hall waza phezu urhulumente isixeko. (Ngoku khumbula ... Karneval lixesha xa amagosa karhulumente caricatured ngokuphandle, kwaye yonyulwa urhulumente mbumbulu. namhlanje, le "Isiphango iHolo Town Beuel" ngabafazi iboniswa bukhona ku Television. Girl Power!
Emva kokuba brunch Carnival kunye Kölsch ibhiya, kukho ukusebenza lo mkhosi ukule wolona Carnival abanamasiko yombutho i Neumarkt. In the evening you can go to the Ghost Parade.
On ekuseni, Catholics yiya ebandleni ukufumana emnqamlezweni kothuthu kwi zabo foreheads njengomqondiso yenguquko. Lobo busuku, komnyaka ixesha Carnival ngokwemveli zaqukunjelwa Isidlo fish.
Have we convinced you to attend Cologne Festival 2019, kodwa? Bambani amatikiti etreyini yakho Sava A Isitimela in minutes with no extra, imali khadi! Which means more money for Weetschaff 🍻
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye itekisi kunye sinike nje ngetyala nesihlanganisi kule post blog, okanye cofa apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/cologne-festival/ - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)